DAT Information Archives - Burburin DAT The
January 1, 2021 /in DAT Information /by Kip Nielsen
In ilkaha waa adag a, laakiin xirfad abaal. xirfad kasta waxa uu wanaagsan iyo diidmo iyo sida xirfad kasta oo kale oo, waa in aad ka fiirsan labada marka la go'aaminayo haddii xirfado in ilkaha kugu habboon. The diidmo ah in ilkaha waxaa badanaa hadhaysay by wanaagsan si ay ardayda pre-ilkaha mararka qaarkood fikradda ah misconstrued ah waxa ay u eg tahay in ay noqon ilkaha. Waan ogahay markii aan go’aansaday inaan noqdo dhakhtar ilkood…
Waa Maxay DAT ah? The Test Admission Ilkaha, sidoo kale loo yaqaan DAT ah, waxaa imtixaanka Mudaysan badan-kala doorasho ay sameeyeen ururka dhakhaatiirta American ah (ADA). DAT qiyaasaa kartida tacliinta guud, fahamka macluumaadka cilmiyaysan, iyo awooda garasho ee examinee ah. Codsadayaasha dugsiga ilkaha waxaa looga baahan yahay in ay qaataan DAT ee si aqbalo wax laga xoreeyo. dugsiga ilkaha. In kasta oo dhibcahaaga DAT aysan ahayn qodobka kaliya ee dugsiyada ilkaha ay tixgeliyaan inta ay go'aan ka gaarayaan…
January 1, 2021 /in DAT Information, Talooyin Study /by Kip Nielsen
The Imtixaanka Awoodda garasho, sidoo kale loo yaqaan PAT, waa mid ka mid ah afar baaritaano ah Baaritaanka Admission Ilkaha. Waxaa muhiim ah in si fiican loo sameeyo imtixaanka this sida ay ugu dhaliyay oo kala duwan oo ka mid ah saddex baaritaano kale – Survey of Sciences Dabiiciga ah, fahamka reading, oo Sabab u tiro ahaaneed – in ay habeeyaan score Celceliska Academic aad. Sidaa darteed, aad rabto in aad rock PAT tan iyo markii ay gool oo keliya u taagan tahay dadka kale ee. Aniguba waan aaminsanahay…
Ka dib bilood shaqo adag oo ku saabsan codsigaaga iyo baranaya DAT ah, siddo oo aad telefoon iyo call in aad loo sugayay ugu dambeyntii soo gaaray. A wakiilka dugsiga ilkaha waa on dhamaadka kale ee telefoonka aad hambalyo on guulaha aad iyo aad ugu Yeedha waraysi ay dugsiga. tahay Kibriyey Waxaad tahay inay maqasho warka iyo kala bixiyey sida ugaar dhammaan qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Ka dib markii heerkaaga xiisahaagu soo noqdo…
Tan iyo markii aan hore u soo wada saaray liis aad ee imtixaan DAT free waayo, waxaan u maleeyey in aan ka badan qaar ka mid ah ka caawin doono in aad la siinayo isku duwidda xogta ka mid ah qalabka waxbarasho lacag la'aan ah si ay kaaga caawiyaan inaad u diyaar garoobaan DAT ah. Waxaa jira dhab garoomo dhowr ah khayraadka halkaas in diyaar u yihiin inay qof walba ee gebihaanba ma jirto qiimaha. Qaar ka mid ah waxyaabaha dib u eegis kuwanu waa khayraadka fantastic si ay u isticmaalaan si aad u diyaarinta DAT. Waxaan aad u soo jeedin lahaa isticmaalka…
maalinta imtixaanka, aadka u la filayey maalintii weli ka cabsan jirin ee ardayda pre-ilkaha ugu. Waxa aanu u leeyihiin in ay la maalintii la dareemayaasha iyo walaaca ka buuxsamay, maxaa yeelay, aadan hubin waxa la filayo. Waa in aad ogtahay waxa aad filan ka hor oo waxa uu xitaa yimaado. Waxaad noqon kartaa mid diyaar u noqon stress free maalinta imtixaanka. Haddaba waan tegi doonaa ka badan waxa aad u baahan tahay si ay u gartaan oo qaban si ay u diyaari maalinta aad u weyn. Kahor Maalinta Imtixaanka I…
Imtixaanka fahamka Reading waa mid ka mid ah afar baaritaano ah Baaritaanka Admission Ilkaha. Baaritaankaan waxaa dhaliyay in lala soo Survey of Sciences Dabiiciga ah iyo Test Sabab u tiro ahaaneed si loo qorsheeyo score Celceliska Academic aad. score A sare ee Imtixaanka fahamka Reading waa hab fudud si ay u kordhiyaan gool Celceliska Academic iyo caawin xafidi kasta dhibcaha hoose in baaritaano kale ama hoosaadyo uu ka samaysan yahay Celceliska Waxbarashada. Si kastaba ha ahaatee, Goorma…